दुई बर्षका लागि बेकह्यामको इन्टर मायामीमा खेल्दै मेस्सी – Talking Sports
अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेस्सी अमेरिकाको मेजर लिग सकर क्लबमा इन्टर मायामीबाट खेल्नका लागि एक नयां १० बर्षे सम्झौतालाई लिएर बार्सिलोनासंग छलफल गरिरहेका छन् ।
मेस्सीलाई लिएर सार्वजनिक भएको नयां घटनाक्रमका बारे इन्टर मायामीका मालिकलेनै पुष्टि गरेका हुन् । मायामी हेराल्ड पत्रिकाले इन्टरका मालिक होर्गे मास र सह मालिक डेभिड बेकह्याम बार्सिलोनालेतैयार गरिरहेको नयां सम्झौता अन्तर्गत नै छोटो समयका लागि मायामीबाट खेल्नको लागि गम्भिर छलफल गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
स्पेनमा सार्वजनिक भइरहेका रिपोर्टहरुका अनुसार मेस्सलिे २०२२-२३ को अन्त्य सम्ममा दुई सिजन स्पेनिस ला लिगा महारथीका लागि खेल्नेछन्र अर्को दुई सिजन मायामीबाट खेल्दै आफ्नो करिअरको अन्त्य गर्नेछन् ।
त्यसपछि मेस्सी पुन बार्सिलोना फर्कदै ६ बर्षको लागि क्लबको ग्लोबल दुत को रुपमा रहनेछन् । मायामी अध्यक्ष मासले हेराल्डलाई बुधबार मेस्सी अन्त्यमा मायामीबाटै खेल्नेमा आशावादी रहेको बताएका थिए ।
“डेभिड (बेकह्याम) र म निकै कडा मिहिनेत गरिरहेका छौं। हामी उत्कृष्ट खेलाडीहरु ल्याउनतर्फ अग्रसर छौं र लियो मेस्सी एक फरक पुस्तामै राज गरेर बसेका हुन् । म उनी मायामीबाट खेल्नेमा आशावादी छु र यसले मायामीलाई बिश्वस्तरीय टिम बनाउने अभियानमा सघाउने छु,” मासले भने ।
यो महिनाको अन्त्यमा ३३ बर्षिय मेस्सीको बार्सिलोनासंगको सम्झौता समाप्त हुने हुंदा उनको भविष्यलाई लिएर धेरै कुरा आंकलन गरिएको छ । ६ पटकका बालोन डि ओर बिजेताले डिसेम्बरमा स्पेनिस टेलिभजनलाई अन्तर्वार्ता दिदै मेस्सीले आफू एमएलस खेल्ने बताएका थिए ।
“अमेरिकामा बस्ने अनुभव लिने, आनन्द उठाउने र त्यहांकोलिगको अनुभव गर्ने मेरो सधैको सपना नै हो,” मेस्सीले भनेका थिए ।
इन्टरका सह मालिक बेकह्यामले फेब्रुवरीमा आफ्नो क्लब मेस्सी र क्रिष्चियानो रोनाल्डोको स्तरका खेलाडीहरु भित्र्याउन मिहिनेत गरिरहेको बताएका थिए । “हामी सधै महान खेलाडीहरुलाई ल्याउन चाहन्छौं, मेस्सी र रोनाल्डो जस्तै,” उनले भनेका थिए ।
मैले साढे २५ वटा ट्रफी जितेको छुः होजे माउरिन्हो
पोर्चुगलको फराकिलो जितमा फर्नान्डेस नायक
अर्को फाइनल खेल्दै मेस्सी। फ्यान सोध्छन् अहिले नजिते कहिले ?
ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको भिडन्तमा सधै प्रश्नहरू उब्जने गर्दछन् । तर शनिबार रियो दि जेनेरो मा हुने कोपा अमेरिकाको फाइनलमा ब्राजिल र अर्जेन्टिना भन्दा पनि मेस्सीको बारेमा प्रश्न उठ्ने छ, र त्यो हो – के मेस्सीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि चुम्न सफल हुनेछन् ?
बार्सिलोनाका मेस्सी २१ औ शताब्दीका सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये एक हुन् भने उनको तुलना आफ्नै देशका डिएगो म्यारोडोना र ब्राजिलका पेलेसग तुलना गर्ने गरिन्छ ।
आफ्नो क्लबबाट खेल्दा मेस्सीले व्यक्तिगत मात्र नभएर क्लबका लागि पनि सबै उपाधि हात पारि सकेका छन् तर देशको लागि उनले केही जित्न सकेका छैनन् ।
३४ बसन्त पार गरेका मेस्सी माथि अहिले फेरी प्रश्न सुरु भएको छः अहिले नभए कहिले ?
“मेस्सीसँग अब दुईवटा मात्र अन्तिम अवसर छ उपाधि चुम्ने” ब्राजिलको लागि सन् १९७० को विश्वकपको उपाधि चुमेका टोस्टाओ भन्छन् । “उनीसंग जारी कोपा अमेरिका र कतारमा अर्को वर्ष आयोजना हुने विश्वकप जित्ने अवसर छ । तर विश्वकपको उपाधि जित्न सहज छैन ।”
शनिबार हुने फाइनलमा कुन टोलीको सम्भावना बलियो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिने सम्भावना छैन । तर ब्राजिल नै अर्जेन्टिना माथि हावी हुने सम्भावना रहेको छ । यसको कारण होब्राजिलको घरेलु मैदान र पछिल्लो चार हप्तामा उसले देखाउदै आएको प्रदर्शन ।
ब्राजिलको उपाधि आशामा मेस्सी नै तगारो बन्न सक्ने सम्भावना पनि व्यापक छ । यस प्रतियोगितामा उनी निकै उत्कृष्ट लयमा रहेका छन् । फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्दा सम्म अर्जेन्टिनाले ११ गोल गर्दा मेस्सी एक्लैले चार गोल गरेका छन् भने पां असिस्ट पनि गर्न सफल भएका छन् ।
“हामीले अहिले मेस्सीको परिष्कृत रूप देखिरहेका छौ,” अर्जेन्टिनाका पुर्व खेलाडी एन्टोनियो मोहम्मदले एक खेल पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । “जब उनले बल आफ्नो खुट्टामा रख्दछन् तब उनलाई विपक्षी खेलाडीहरूले घेर्ने गर्दछन् र त्यो देख्दा म्यारोडोना उच्च लयमा हुंदा देखिने दृश्य जस्तै हो ।”
मेस्सीले यस अघि पनि धेरै अन्तरवार्तामा अर्जेन्टिका लागि एक उपाधि हात पार्ने कुरा गर्दै आएका छन् । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ मेस्सीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिको महत्व ।
मेस्सीले यस अघि अर्जेन्टिनाको लागि चार फाइनल खेलेका छन् जसमा उनी सधै हारको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । मेस्सी सन् २००७, २०१५ र २०१६ को कोपा अमेरिका तथा सन् २०१४ को विश्वकपमा उपविजेतामा सिमित भएका थिए ।
अघिल्ला प्रतियोगिताहरुमा जब जब अर्जेन्टिना फाइनलमा विफल हुन्थ्यो प्राय सबैले मेस्सीलाई निराश पारेकोउनको टोलीको अन्य खेलाडीलाई दोष जाने गर्दथ्यो । सबैको गुनासो मेस्सीले दिएको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेको र उनको खेलसंग मेल खान नसकेको हुने गर्दथ्यो।
तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ । सायद अहिले मेस्सीले खेलेको सबैभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट टोली छ अर्जेन्टिनाको । त्यसैले पनि मेस्सीले यसका लागि बहाना पाउने सम्भावना न्यून छ ।
अहिलेको टोली अर्जेन्टिनाको सन् १९७८ अथवा सन् १९८६ को जस्तो छैन तर पनि लियो नेस्कालोनीको टोलीले पछिल्ला १९ खेलमा लगातार जित हात पार्दै आएको छ । पछिल्लो पटक अर्जेन्टिनाले सन् २०१९ को कोपा अमेरिकामा पराजित भोगे पछि हारको सामना गर्न परेको छैन ।
मेस्सी बाहेक अर्जेन्टिनाको टोलीमा रहेका सर्जियो अगुएरो र एन्जेल डि मारिया जस्ता अनुभवी खेलाडीका लागि पनि अर्को वर्षको विश्वकप जित्न सहज नरहेका कारण कोपा अमेरिका उनीहरुको लागि सबैभन्दा ठूलो उपाधि हुन सक्छ ।
अनुभवी खेलाडी र युवा खेलाडी जसले उनीहरुको खेल हेर्दै र आदर्श मान्दै ठुला भए र अहिले अर्जेन्टिनाको टोलीका लागि संगै खेल्दै छन्, उनीहरुलाई पनि थाहा छ कि उनीहरु अर्जेन्टिनाका लागि मात्र नभएर मेस्सीका लागि पनि खेल्दै छन् । उनीहरुको पनि पहिलो र एक मात्र लक्ष्य भनेको मेस्सीलाई उपाधी दिलाउने रहने छ ।
“हामी पनि अर्जेन्टिनाले उपाधि चुमोस् भन्नेमा निकै उत्साहित छौ। मुख्य कुरा यो मेस्सीको लागि पनि उपहार हुनेछ,” मोहम्मदले भने ।
‘यो इटाली र १९८२ को बिश्वकप जित्ने इटालीमा समानता छ’
इटालीका पुर्व कप्तान डिनो जोफले रोबर्टो मान्चिनीको युरो कप फाइनल खेल्न गइरहेको टोली र आफ्नो नेतृत्वमा १९८२ को बिश्वकप उपाधि उचाल्ने धेरै हदसम्म उस्तै पाएको बताएका छन् ।
अज्जुरीले आइतबार वेम्ब्लीमा हुने फाइनलमा इंगल्याण्डको सामना गर्दै गर्दा दोश्रो पटक युरोकप जित्ने दाउमा हुनेछ । पहिलो युरो कप १९६८ मा जोफले नै जिताएका थिए ।
तर जोफको करिअरको उच्च बिन्दु त्यसको १४ बर्षपछि आएको थियो जब उनले ४० बर्षको उमेरमा बिश्वकपको उपाधि उचालेका थिए ।
“म त्यो टिम र यो टिममा केही समानताहरु देख्छु। उनीहरु निकै तिब्र र जीवन्त देखिन्छन् र यसले १९८२ को हाम्रो टोली उस्तै रहेको स्पष्ट पार्छ,” पुर्व गोलकिपिंग लेजेण्ड जोफले भने ।
लगातार ३३ खेलमा अपराजित रहदै नयां राष्ट्रिय किर्तिमान कायम गरेको इटालीलाई स्पेनबिरुद्ध सेमिफाइनलमा जित हात पार्नका लागि पेनाल्टी सुटआउटको आवश्यकता रहेको थियो ।
१९६८ यता तेश्रो फाइनलमा खेल्न गइरहेको इटाली २००० को उपाधि भिडन्तमा पराजित हुंदा जोफ नै प्रशिक्षक थिए । स्पेनबिरुद्ध २०१२ मा भएको फाइनलमा इटालीले ४-० को लज्जास्पद हार व्यहोरेको थियो ।
युरो कप जित्ने हो भने २०१८ को बिश्वकपमा स्थान बनाउन नसकेपछि टिम सम्हालेका मान्चिनीको इटालीका लागि यो सबैभन्दा सनसनीपूर्ण नतिजा हुनेछ ।
“खेलाडीहरु बाहेक धेरै कुरा मान्चिनी कै हातमा हुन्छ किनभने उनलाई सही निर्णयका बारे ज्ञान छ । उनले टिममा आत्मबिश्वास ल्याएका छन् र गाह्रो परिस्थितिमा राम्रो फुटबल पनि खेलिरहेको छ । म आशा गर्छु उनले अब स्पेनको जस्तो आधिपत्य (२००८ को युरो कप, २०१० को बिश्वपक र २०१२ को युरो कप) कायम गर्नेछन्,” जोफले भने ।
“बिश्वकप धेरै पर छैन र म बिश्वस्त पनि छु । मेरो लागि इटाली फाइनल सम्म पुग्नु कुनै अचम्मको बिषय होइन । उनीहरुले राम्रो गर्नेमा म बिश्वस्त थिए ।”